Cixi Longteng Project Nkọwa
Ọkpụkpụ ụrọ a na-arụ ọrụ anyịed a ahụkarị brik Ndinam usoro na abụọ isi na inyeaka ihe. Isi ihe bụ silt, nke a na-ehichapụ site na okpukpu abụọ rollers crusher mgbe e wepụsịrị nkume, na ihe inyeaka bụ ihe mkpofu ihe, nke a na-edozi ya ma ọ bụrụ na ọ na-akụda ya, ihe abụọ ahụ agwakọta na maka ịka nká. N'otu oge ahụ, ọrụ ngo adopts otu na-acha akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ brik stacking na maka firing technology, na-acha akwụkwọ ndụ brik na-akpa stacked site a robot ka n'ekwú ụgbọ ala maka 7 n'ígwé, na mgbe ahụ banye ihicha ụlọ nke ihicha site green brick akara akara. Mgbe ihichachara, a ga-atụkọta brik na-acha akwụkwọ ndụ ọzọ site na 7-oyi akwa na 14-oyi akwa na mgbe nke ahụ gasịchara ite ọkụ maka nsị.
Aginglọ nkwakọba ihe nke ọrụ ahụ na-ebute akwa-ụdị multi-ịwụ excavator, nke nwere njirimara nke mmetụta ịka nká nke akụrụngwa, ọnụ ọgụgụ nke ịka nká, na ihe ndị ọzọ nwere ezi uche site na excavator. Igwe brik nwere nnukwu akpaaka mgbe ọ wepụsịrị osisi apịtị. Iji ígwè ọrụ abụọ iji dobe brik na-acha akwụkwọ ndụ 7-oyi akwa. Duo na otu na-acha uhie uhie na-acha akwụkwọ ndụ na-acha uhie uhie na maka ịgbara nkà na ụzụ, ụgbọ ala ọkụ ahụ nwere nnukwu akara nke brik na-acha akwụkwọ ndụ, mmepụta dị elu nke ọkụ na àgwà nke ngwaahịa sintered.
Igwe ọkụ a na-arụ ọrụ nwere akụkụ nke 3.7m, ọwara isii maka mmiri na tunnels atọ maka ọkụ, na-ewepụta kwa afọ nke ihe dị nde 150-200 (nke dabara na brik ọkọlọtọ ndị China).